Nyeredzi nyowani dzemisika dziri kubuda | Ehupfumi Zvemari
Misika iri kusimukira idzo nyika kana hupfumi huri muchikamu chekuchinja pakati penyika dzichiri kusimukira uye dzakabudirira. Ivo vanonakidza kwazvo kufunga nekuti vanogona kumiririra mukana webhizinesi mumisika yemari. Hazvishamise kuti kugona kwayo kwekudzokorora kunogona kuve kwakakura uye mune chero mamiriro ezvinhu pamusoro petsika dzemari dzemisika. Nekudaro, chenjera chaizvo nekuti mashandiro ako ane njodzi huru kwazvo. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda asi zvakare siya akawanda ma euro munzira.
Kusvika pari zvino isu tave kushandiswa kune misika iri kusimukira ichimiririrwa neinonzi BRICS. Sezvinei, Brazil, Russia, India, China neSouth Africa. Asi mumwedzi yapfuura, dzimwe misika dziri kubuda dzakabuda. Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi anofanira kutengeswa pamusika wemasheya mune mamwe acho? Zvakanaka, hatisi kuzotaura kune izvo zvinogona kuitwa semukana webhizimusi kune vane hutsinye vashoma nepakati varimi.
Mukati meichi chirevo, Bulgaria, Indonesia, Vietnam, Peru neMexico Ivo vanoponeswa, pakati pemisika irikubuda, kubva mukusava nechokwadi kwepasi rose kuri kukonzera kutyisidzira kukura kwehupfumi muchikamu chikuru cheupfumi hwenyika, zvinodaro kubva kuCrédito y Caución. Kunzwisisa kuti vanochengetedza tarisiro yakanaka yekukura uye kushomeka kushoma kune njodzi dzepasi rose dzatiri kutarisana nadzo panguva ino chaiyo. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona kuve imwe yesarudzo dzekudyara mumisika yequity yenyika dzambotaurwa.
1 Kubuda: musika niches
2 Nyika uye zvikamu zvinobudirira
3 Maitiro ekushanda mumisika iyi?
4 Misika isina kugadzikana kwazvo
Kubuda: musika niches
Aya misika ari kubuda anozivikanwa nenyaya yekuti hupfumi hwavo hunoshanduka nenzira yakagadzikana, nemamiriro ezvinhu akanaka ekutengeserana ezvavanofarira, maitiro ekubhadhara akasimba uye pamusoro pezvose. kukura uye bhizinesi mikana muzvikamu zvakasiyana siyana zvechigadzirwa chinogadzira hupfumi hwavo.
Saka hazvishamise, kuti dzimwe dzenyika idzi dzinogona kuita zvirinani pane mune dzinonzi nyika dzakasimukira. Zvisinei nenjodzi inonetsa irimo mukuvhurwa kwenzvimbo mumisika yemari.
Nyika uye zvikamu zvinobudirira
Indonezhiya inopa mikana yebhizinesi munzvimbo dzakasiyana dzehupfumi. Pakati pavo, kemikari, mishonga yemishonga, zvigadzirwa, chikafu, zvipfeko neshangu, kugamuchira vaenzi nekuvaka, pakati pezvimwe zvakakosha. Ndichiri pane zvinopesana, kumwe kubuda seBulgaria parizvino kuri muzvikamu zvekukosha kwevatengi zvinhu, fashoni uye zororo mune zvese. Izvo zvinokwanisa kuunzwa mune inotevera inivhesitimendi portfolio nechinangwa chekuita kuti capital iwanikwe pane iyo stock inobatsira.
Kune rimwe divi, Vietnam iripowo, iyo inopa ekuvheneka masevhisi, kuvaka, kushanya, franchise, zvigadzirwa zvemari uye mainjiniya mune zvese. Ndichiri munyika dzeAmerica, ndiko kuti, Peru neMexico vanovakira zano ravo pakuvaka uye simba rinowedzerwazve. Sezvauri kuona, iko kupihwa kwekudyara uko kwakanyatso kusiyaniswa kuitira kuti iwe ugone kusarudza bhizinesi chikamu chinonyatsokodzera chimiro chako semudyari mudiki nepakati nepakati. Nemhando dzakasiyana siyana dzemusika wemasheya uye nezvese zvido, uye sezvauri kuona izvozvi.
Maitiro ekushanda mumisika iyi?
Kuchengetedza kunofanirwa kuve kwakajairika kuita muzviito zvevashambadzi vadiki nepakati munzvimbo ino yekudyara. Kunyanya, sezvo iri misika yakasarudzika inoda kurapwa kwakasiyana kupfuura kwaiteverwa munzvimbo dzakajairika. Iko kwaunogona kuteedzera inotevera nhungamiro yekuita yatinofumura pazasi muchinyorwa chino.
Ita mashandiro eakanyanya shoma shoma, nekuda kwekuti iwo ari mashandiro mumisika yequity nekuratidzwa kukuru kune njodzi.
Ese maodha ekutenga anofanirwa kusanganisira ekurasikirwa ekuremerwa mvumo kana iwo anozivikanwa zvakanyanya se mira kurasikirwa mirairo. Nechinangwa chekufungidzira chete kurasikirwa uko vashandisi vanogona kutakura chero nguva yakapihwa.
Ronga a nzira yekudyara kuitira kuti neiyi nzira isu tiwane zvishoma kujekesa izvo zvatinonyatsoda kuwana. Mune iyo nguva yekugara kweaya mashandiro inosanganisirwa, ndiko kuti, kana zvakagadzirirwa kwenguva pfupi, yepakati kana yakareba.
Ziva zvirinani zvishoma nezve musika wekuyera kwatichaisa mari inowanika kumusika wemasheya. Izvi zvichatibatsira nzvenga rimwe dambudziko mukufamba kwakashama mumisika yemari.
Kana iwe uchikwanisa kusarudza tsika idzo dzinenge dzinozivikanwa zvishoma uye idzo ngatizivisei mitsara yebhizinesi kwayakatsaurirwa. Kumwe kwekukanganisa kukuru mune izvi kesi kutenga kutenga uye zano iri mukugadzirira kweportfolio yemitengo inogona kutitungamira kuti titore sarudzo isiriyo zvachose.
Misika isina kugadzikana kwazvo
Kana iyi misika yepasi rose ichizivikanwa nechimwe chinhu, zviri nekusagadzikana kwakanyanya uko mitengo yemasheya avo yakanyorwa. Nemasimba akasiyana pakati payo yepamusoro uye mashoma mitengo, nematanho ekutsauka ezuva nezuva ayo anogona kutungamira padanho re5% kana kunyanyisa zvakanyanya mune zvimwe zviitiko. Nepo kune rimwe divi, iwo maitiro ayo anowanzo tenderera kuputsa kwetsigiro uye kupesana nehumwe huwandu uye izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kwazvo kutevera kuburikidza nemachati kune ongororo yehunyanzvi.
Yese matanho ekuzvidzivirira mashoma ekudzivirira mari yemari yedu mune aya akasarudzika emari misika yemari. Hatigone kukanganwa kuti dzakanyanya kuoma kutevera kupfuura mumisika yechinyakare uye musiyano uyu unofanirwa kutariswa kana tichigadzirira yedu inotevera yekudyara portfolio. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu kana zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Usakanganwe kana iwe usiri kuda kuve kubva izvozvi zvichienda pane kumwe kushamisika kwakashata uko kunogona kukanganisa chiyero cheakaundi yako yekuchengetedza kwemakore mashoma anotevera. Zvirinani kudzivirirwa pane kurasikirwa nechikamu chakanaka cheako wega kana wemhuri capital.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nyeredzi nyowani dzemisika irikubuda